Ambohitrimanjaka: rongony 400 kilao nodoran’ny polisy | NewsMada
Notanterahin’ny polisy misahana ny ady amin’ny fidorohana zava-mahadomelina eny Anosy, omaly tamin’ny 11 ora maraina, teny Ambohitrimanjaka, ny fandorana ireo rongony tratran’izy ireo nandritra ny volana jolay. Rongony milanja 400kg ireto lasa lavenona ireto. Nanatrika izany ny solontenan’ny fitsarana, ny mpitsara Andrianarivony Nirina.
Andaniny, voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria boriboritany faharoa, ny lehilahy miisa enina, ny 25 jolay teo teny amin’iny faritra Ambohipotsy iny. Tratra am-bodiomby teo am-pidorohana zava-mahadomelina mialoha ny hanaovany ny asa ratsiny, sinto-mahery sy fanendahana, ireo lehilahy ireo.
Taorian’ny vaovao marim-pototra azon’ny polisy teny an-toerana mikasika ny toerana fidorohan’izy ireo zava-mahadomelina alohan’ny hanantanterahany ny asa ratsiny, nanao andrimaso teny ny polisy ka izao tra-tehaka izao izy ireo. Eo amin’ny 20 taona eo ny salan-taon’izy ireo ary samy mbola mpianatra daholo.
Mbola teny Ambohipotsy ihany ny 24 jolay, roa lahy no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany faharoa, nanendaka olona roa teny an-toerana. Voasambotra ny 24 jolay ny iray vokatry ny fiaraha-miasa tamin’ny fokonolona ary ny marain’ny 25 jolay kosa ny iray vao tratra. Efa tafaverina amin’ny tompony ny entana nangalariny. Nahatrarana antsy tany amin’izy ireo. Natolotra ny fampoanoavana, omaly, izy ireo.